Kamerona: Domberina Rehefa Nahita ny Valim-Pifidianana Filoham-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Kamerona: Domberina Rehefa Nahita ny Valim-Pifidianana Filoham-Pirenena
Voadika ny 22 Oktobra 2011 19:40 GMT
Hatsikana, hatezerana, filazana ankolaka ny fialan'i Muammar Gaddafi ary fiantsoana fandriampahalemana no nibahana tamin'ny fandrenesana ny valim-pifidianana filoham-pirenena izay nandresen'ny filoha ankehitriny, Paul Biya.
Ora vitsy monja taorian'ny nilazan'ny Fitsarana Tampony ny fandresen'i Biya tamin'ny 77.9% ny vato manan-kery, dia nasehon'ny Kameroney sasantsasany indray ny fahakingany maneso ny fanamby atrehin'izy ireo. Nahazo aingam-panahy tamin'ilay hira rap milaza fa ‘Mandresy hatrany i Biya’ niely haingana dia haingana tamin'ny alalan'ny tenifototra #cmr11 ny mpisiokantsera.
“Paul Biya Feat Dj Khaled : All i do is win, win, win No matter what…”. #cmr11
Paul Biya Hirain'ny dj Khaled : Ny ataoko dia ny mandresy, mandresy, mandresy tsy olana ny hoe amin'ny fomba ahoana.
Nitondra an'i Kamerona hatramin'ny 1982 i Biya. Ny fampitambarana an'i Biya amin'ny ‘no matter what’ (tsy olana hoe amin'ny fomba ahoana) amin'ny lohahevitra napetrak'ilay mpihira rap moa dia nisy nanao photo-montage (fanamboamboarana an-tsary) izay natao hampitovitovy ilay DJ Khaled amin'ilay mpitondra amin'izao fotoana izao.
DJ Khaled “All I Do Is Win” (Ny Hany Ataoko dia ny Mandresy) hirain'i Ludacris, Rick Ross, T-Pain & Snoop Dogg:
Na ahoana na ahoana moa dia mila hatsikana mahafinaritra ny Kameroney fa mety hivorivory mba hiavotan-tena mandra-piandry ny valim-pifidianana farany izay nokarakaraina tamin'ny 9 Oktobra.
Ny Filoha Paul Biya natao mitovy endrika tamin ilay mpihira rap Dj Khaled
Lava dia lava sady mandreraka ny fotoam-pitsarana fanambarana ny voka-pifidianana. Efa ho adiny 9 tsy mitsahatra no namakian'ny Lehiben'ny Fitsarana Tampony , Alexis Dipanda Mouelle izany vokatra izany.
Nisiokantsera i Dibussi Tande niteny hoe:
Justice Dipanda's reading is now officially longer than Fidel Castro's longest speech ever which was 7 hrs 10 mins #cmr11 #cameroon
Lava noho ny kabary lava indrindra nataon'i Fidel Castro naharitra 7ora 10mn ankehitriny ny vakintenin'ny mpitsara Dipanda
Niteny i Bate Etah:
You could fly from Dakar to Yaounde with Abidjan, Cotonou stopovers b4 Chief Justice is done reading election results #cmr11 @gefsoutlook
Afa-misidina avy any Dakar mankany Yaounde mandalo any Abidjan, Cotonou ianao fa tonga ianao mandra-pahavitan'ny Filohan'ny Fitsarana ny ny voka-pifidianana.
Saingy manan-kevitra ihany koa ianao:
To Cameroon authorities: Reading election results for over 8hrs does NOT make them democratic. It shows the height of incompetence. #cmr11
Ho an'ny manampahefana: TSY milaza ny maha-demokratika ny famakiana ny valim-pifidianana mihoatra ny adiny 8. Milaza ny haavon-tsy fahaizana.
Indro ny lahatsary (amin'ny teny frantsay) notsongaina (fa tsy ilay adiny 9!) nanambaran'ny Mpitsara Dipanda Mouelle ny mpandresy.Hoy izy:
Voalohany Biya RDPC (Antoko CPDM) nahazo vato 3.772.527 manome 77,989%…Vokatr'izany fahazoana ny maro an'isa izany dia ambara ho Filohan'ny Repoblika ny kandidà Paul Biya
Leslie Tita nametraka tao amin'ny bolongany Diary of an African Designer [diarin'ilay Afrika mpanao Haibika] an-tsarisary ny fombafomban'ilay fifidianana sy ny valim-pifidianana ho an'izay liana.
Ankoatra ny valiny, inona koa no lesona azon'ny Kameroney tamin'ity fifidianana ity? Dibussi Tande ao amin'ny Scribbles From the Den [Soritsoritra avy any an-johy] namoaka ny taratasy fanasana avy amin'ny Ambasadaoro Amerikana ao Kamerona ho an'ny Fiarahamonim-pirenena hiaraka hitafatafa aminy ao amin'ny Masoivoho. Navoitran'i Dibussi ny sombiny avy amin'ny fanambaran'ny Ambasadaoro:
Tsy misy ara-teorika ny demokrasia rehefa tsy hita amin'ny fampiharana azy. Tsy mety hisy an-taratasy izy rehefa tsy hita an-dalambe. Araka izay efa naverimberiko matetika, tsy afa-miandry ny fahalavorarian'ny fepetra hampiharana ny demokrasia isika vao hampihatra ny zo demokratika. Tsy maintsy mamorona ny fepetra hisian'ny demokrasia isika amin'ny fampiharana ny zo demokratika
Any ambanimbany any ny Ambasadaoro Jackson no niteny:
As Americans we believe that as the world as a whole democratizes, the world as a whole prospers and frees itself from poverty, hunger, disease, illiteracy, hatred, discrimination, and war.The underlying premise is that we must progress in tandem rather than apart and that the people of every country should have equal opportunity and freedom. Promoting democracy and civil society around the world is not interfering…it is simply sharing our vision of what we wish for all peoples of the world.
Amin'ny maha-Amerikana anay no inoanay fa rehefa mametraka demokrasia ny tany manontolo, dia hiroborobo sy ho afaka amin'ny fahantrana, hanoanana, aretina, tsy fahaiza-mamaky teny, fankahalana, fanavakavahana ary amin'ny ady ny tany manontolo tsy misy anavahana. Ny voa [voambary ohatra] tsy maintsy avoitra dia tsy maintsy miara-mandroso isika fa tsy handroso manokana ary tokony hitovy fahafahana sy fahalalahana ny firenena tsirairay avy. Tsy fitsabatsabahana ny fampiroboroboana ny demokrasia sy ny fiaraha-monim-pirenena…Fizarana ny fomba fijery amin'izay irarianay hananan'ny mponina manerantany izany
Ka mety hisy ve noho izany ny fidiran'ny any ivelany tahaka izay hita any Libya?
Mahita teboka maromaro ifandraisana eo amin'ny Mpitarika Libyana Muammar Gaddafi sy Paul Biya ny mpamaham-bolongana Kameroney sasantsasany, ka nilazan'izy ireo fa tokony hanokatra ny mason'i Biya ny fahafatesan'i Gaddafi eo am-pelatanan'ny revolisionera andro iray mialoha ny nivoahan'ny voka-pifidianana tany Kamerona.
Hoy ny Chia Report:
Araka izay mety holazain'i Kaddafi amin'i Biya avy any ankoatra any, tsy misy ny fifikirana amina Mpanjaka hidaboka izany. Toetran'olombelona no mpamadika rehefa mety ny vidiny. Ny sarin'ilay Kaddafi maratra sy miala aina ao Sirte, tanàna nahaterahany sy ahafatesany ankehitriny, no fampahatsiarovahana hafa ho an'i Biya fa na dia Mvo Meka nahaterahany aza dia tsy hahafina azy amin'ny fahatezeran'ny mponina ary tahaka izany koa ny birao izay hilaozany.
Saingy misy ny mino fa ny valim-pifidinana dia fanamafisana ny vinan'i Paul Biya ho an'i Kamerona. Farafaharatsiny dia fomba fijerina mpanao gazety miasa ao amin'ny televizionam-panjakana izany. Ny fanadihadiany moa (lahatsary) dia azo jerena ao amin'ny Up Station Mount Cameroon blog.